Kudzingwa basa zvisina tsarukano | Economy Finance
Kudzingwa basa zvisina tsarukano
Chinodiwa nemushandi wese kuchengetedza basa rake. Nekudaro, pane dzimwe nguva apo, kunyangwe ukaedza zvakaoma sei, unotarisana nemhedzisiro yekurasikirwa nebasa rako. Dambudziko nderekuti dzimwe nguva kurasikirwa ikoko kunobva kune a Kudzingwa basa zvisina tsarukano.
Asi chii chinonzi kudzingwa basa zvisina kururama? Chii chinokonzera kuti rudzi urwu rumire basa? Chii chingaitwa? Pane muripo here? Kana iwe uchida kupindura mibvunzo iyi yese, saka isu tichakubatsira iwe kuigadzirisa.
1 Chii chinonzi kudzingwa basa zvisina tsarukano
2 Zvikonzero zvekudzingwa basa zvisina tsarukano
3 Ndoita sei kana ndadzingwa neformula iyi
4 Chii chiri muripo pakudzingwa basa zvisina tsarukano
5 Une kodzero yekurovha here?
Chii chinonzi kudzingwa basa zvisina tsarukano
Kudzingwa basa zvisina tsarukano, zvinotemerwa nechinyorwa 56 cheMutemo weVashandi (ET) inosimbisa kuti kudzingwa kunofungidzirwa kuti kunoitika pasina zvikonzero zvinoruramiswa nemutemo. Ndiko kuti, pane kumira kwebasa pasina chero chikonzero chingave chiri chese.
Nemamwe mashoko, zvinoitika apo mushandirwi (kana kuti mumwe mubato kuchibvumirano chebasa) asingapembedzi kudzingwa, haitauri chave chiri chikonzero chakanaka nei ichimira kuva nerubatsiro rwemushandi kana kuti chainoti haigoni kutsigirwa.
Kukodzera uku kweasingabvumirwe kunogona kungotongwa nemutongi, anova ndiye anoongorora kuti chokwadi chii uye zvikonzero uye kuti kudzingwa uku kwaitwa nemutemo (nemutemo) kana kuti kwete.
Nokudaro, tinogona kutaura kuti mushandi anotarisana marudzi maviri ekurasikirwa:
Chinangwa, icho chinoitika nekuda kwehunyanzvi, hwesangano, hwehupfumi kana kugadzirwa uye ine muripo wemazuva makumi maviri pagore rakashanda, pamwe nepamusoro pekubhadhara kwegumi nemaviri pamwedzi uye nechiziviso chemazuva gumi nemashanu.
Kuranga, kunogadzirwa nehunhu hwakakomba, hune mhosva uye husina kufanira uye husingakupi muripo.
Kana paine chero rudzi rwekugumiswa kwezviri pamusoro, mushandi anogona kupa vhoti yekuyananisa mukati memazuva makumi maviri kubva pakudzingwa uye, kana pasina chibvumirano chasvikwa, isa chikumbiro mudare rezvemagariro kuti mutongi ave iye anosarudza kana kurasikirwa. zvebasa racho zvakafanira, hazvina kunaka kana zvisina maturo.
Zvikonzero zvekudzingwa basa zvisina tsarukano
Mushandi haagone kunyatsoona kuti kudzingwa kwake hakuna kunaka, uye chikonzero chega chingakonzeresa, kune chikamu chemutongi, kuti azvizivise sezvingave izvo, kana kuti hapana chikonzero chakanaka chekudzingwa kwakaitika, kungave pasi pechimiro chechinangwa kana kudzingwa kwechirango; kana kuti, kana pane chikonzero, hazvigone kusimbiswa.
Nokudaro, tinogona kutaura kuti kudzingwa kusina kururama kunokonzerwa nokuti chikonzero nei mushandi wacho akadzingwa pabasa rake hachigoni kuratidzwa.
Ndoita sei kana ndadzingwa neformula iyi
Wakadzingwa basa zvisina tsarukano here? Zvakanaka, sezvatakakuudza, Une mazuva makumi maviri kubva paunoziviswa nezvekudzingwa basa kuti upe vhoti yekuyananisa. Iyi inova nhamba yekudzingwa basa zvisina tsarukano, pamusoro pekutaura mari yaunofungidzira kuti ndeyako.
Kana mushure memusangano iwoyo pakati pemushandi nemushandirwi pasina chibvumirano, chokwadi chekuti wakapinda uye wakaedza chibvumirano chatova pamutemo kuti upe mhosva mudare rezvemagariro. Unofanira kuripfeka rini? Iwe une nguva yemazuva makumi maviri kubva pakuzivisa kwekudzingwa. Asi musazvinetse, kana muchikumbira vhoti yeruyananiso, nguva inomiswa, kureva kuti haimhanye kusvika yapembererwa.
Kana mutongi aona kuti kudzingwa hakubvumirwe, wobva wapa sarudzo kukambani ku:
Verenga mushandi. Izvi hazviwanzoitika. Muchiitiko ichi, kana kudzorerwa kwakagamuchirwa, kunofanira kurangarirwa kuti anofanira kubhadharwa muhoro waaizowana panguva yose yaakadzingwa zvisina kururama. Uye kune chikamu chemushandi, kana akawana muripo wekudzingwa, anofanira kudzosera.
Bhadhara muripo. Ndiyo yakajairika uye inosarudzwa nevazhinji vemabhizinesi nemakambani.
Chii chiri muripo pakudzingwa basa zvisina tsarukano
Kana kudzingwa kuchinzi hakubvumirwe, uye kambani inosarudza kubviswa, saka uchafanira kubhadhara, panzvimbo pemazuva makumi maviri pagore akashanda, mazuva makumi matatu nematatu emuhoro pagore, nemari inokwana makumi maviri nemana pamwedzi.
Nekudaro, zvinogoneka kuti kune vashandi vanogona kuwana mazuva makumi mana neshanu pagore, nemari inokwana makumi mana nemaviri ekubhadhara pamwedzi. Vaizova vanaani? Avo vane kondirakiti pamberi paFebruary 45, 42.
Chimwe chinhu chisingazivikanwe nevazhinji ndechekuti muripo unopihwa mushandi unofanirwa kuratidzwa mugwaro remari. Ichave pasi pemutero wemuhoro wega, asi usazvinetse, nekuti inoregererwa. Kunyanya, inokurukurwa mu Chisungo chechinomwe e) cheMutemo weMutero Wemari Yemunhu inoti chii:
«E) Muripo wekudzingwa kana kugumiswa kwemushandi, muhuwandu hwakagadzwa nehunhu hunosungirwa muMutemo weVashandi, mumitemo yayo yekushandisa kana, pazvinenge zvakakodzera, mumirau inodzora kuitiswa kwemitongo, pasina kukwanisa kutariswa saizvozvo. iyo inosimbiswa nekuda kwechibvumirano, chibvumirano kana chibvumirano.
Pasina rusaruro kune zvakatemwa nendima yapfuura, kana paine kudzingwa kwevanhu pamwe chete kunoitwa zvinoenderana nezviri muchikamu che51 cheMutemo weVashandi, kana kukonzerwa nezvikonzero zvakapihwa mutsamba c) yechinyorwa 52 cheMutemo wambotaurwa. , Zvisineyi kuti, muzviitiko zvose zviri zviviri, zvinokonzerwa nehupfumi, unyanzvi, sangano, zvikonzero zvekugadzira kana kumanikidzira majeure, chikamu chemuripo wakagamuchirwa usingapfuuri miganhu inosungirirwa yakagadzwa muChirevo chataurwa pamusoro pekudzingwa zvisina kururama chicharegererwa.
Huwandu hwemuripo wekuregererwa unotaurwa mutsamba ino uchaganhurwa kusvika ku180.000 euros. "
Une kodzero yekurovha here?
Sezvaunoziva, zvichienderana nekuti unodzingwa sei, unogona kumira kana kwete. Asi chii chinoitika kana mutongi akataura kuti kudzingwa kwacho hakuna kururama? Kana kambani yako yekare yafunga kubhadhara muripo, chokwadi chekuti yakanzi haibvumirwe inotokupa kodzero yekurovha.
Zvino for uve nerubatsiro rwekushaya basa iwe unofanirwa kuzadzisa zvinodiwa, kureva kuti:
Vakanyora mashoma emazuva mazana matatu nemakumi matanhatu mumakore matanhatu apfuura.
Kusashanda, kusaina kurovha uye nekuzvipira kuita zvese zvinogoneka zviito kutsvaga basa idzva.
Sezvaunogona kuona, kudzingwa zvisina kururama inzira yekudzivirira vashandi kubva kune zvakaipa maitiro evashandirwi nemakambani anofunga kuti vanogona kuhaya uye moto pasina chikonzero chakajeka, kunyima kuti mushandi wekugadzikana kwebasa uye basa pasina nekudaro kuita chimwe chinhu chakaitika kururamisa. it. Une mimwe mibvunzo here? Tiudze uye isu tichaedza kupindura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Kudzingwa basa zvisina tsarukano
Ndeapi makomisheni akatanga kubhadharisa mabhanga?
Muenzaniso 111: ndeyei